Career – Better HR Blog
လူတိုင်း ပြောပါတယ်။ အလုပ်ထဲမှာ collaboration လိုတယ်၊ Team work လိုတယ်။ အဲ့အရာတွေက ကုမ္ပဏီ အဖွဲ့အစည်းတွေရဲ့ အောင်မြင်မှုမအောင်မြင်မှုအတွက် အရေးကြီးတဲ့ အချက်လို့ ပြောကြပါတယ်။ အထူးသဖြင့် တရုတ်နှင့် အမေရိကန်လို မြန်ဆန်တဲ့စျေးကွက်တွေ၊ ကြမ်းတမ်းပြီး dynamic ဖြစ်တဲ့ frontier စျေးကွက်တွေမှာ လွန်စွာအရေးပါတယ်လို့ ပြောကြပါတယ်။ သုသေသန တစ်ခုကတော့ collaboration ကအရေးကြီးတယ် ၈၁ ရာခိုင်နှုန်းယုံကြည်ပြီး၊ ၇၁...
အသက်ရှူသွင်းလိုက်ပြီဆိုရင် လေပြန်ထုတ်ရတယ်။ ကိုယ်ကလေပြန်မထုတ်နိုင်တော့ရင် အရေးပေါ် အသက်အန္တရယ်ဖြစ်ပြီး ဆေးရုံရောက်သွားနိုင်ပါတယ်။ အဲဒီအတိုင်းပါပဲ ကိုယ့်စိတ်ကိုလဲ အမြဲချုပ်တည်းထားပြီး မဖြေလျော့နိုင်ရင် စိတ်မှာဒဏ်ပိလာတတ်ပါတယ်။ စိတ်ဖိစီးမှုဆိုတဲ့အရာတွေက ရှောင်လွှဲလို့မရနိုင်ပါဘူး။ ဒါဟာစိန်ခေါ်မှုတစ်ခုဖြစ်နေတာဆိုရင် အဲဒီအတွက်အဖြေဆိုတာရှိပါတယ်။ အဖြေရှိတဲ့စိန်ခေါ်မှုတွေကို...
မြင်ဘူးလား မသိဘူး အလုပ်မှာ။ ဘေးကလူတွေ ဖေ့ဘုတ်သုံးနေတာတို့၊ဟိုကြည့် ဒီကြည့်လုပ်နေတာတို့၊ အလုပ်ကို အာရုံမစိုက်တာတို့။ အဖြေကတော့ ရှင်းပါတယ်။ သူတို့ လက်ရှိလုပ်နေရတဲ့ အလုပ်တွေက ဖေ့ဘုတ်တို့၊ အင်စတာ(ရမ် မှာ ရှိတဲ့ အကြောင်းတွေလောက် စိတ်ဝင်စားစရာ မကောင်းဘူးလို့ ထင်နေလို့ပါပဲ။ အကယ်လို့ သင်က ရာထူးမြင့်တဲ့လူဖြစ်ရင် ဘာလို့ ပျင်းနေလဲ ဆိုတာကို အဖြေရှာမရဘူး ဖြစ်နေပါလိမ့်မယ်။ ရာထူးမြင့်တဲ့ လူမျက်လုံးကကြည့်ရင်...
ကြက်ဥပုပ်တစ်လုံးက မီးဖိုချောင်ထဲမှာ ဘယ် လောက်များဖျက်ဆီးနိုင်မှာလဲ။ လွယ်လွယ် ကူကူပြောရလျှင် မ ကောင်းသောကြက်ဥတစ်လုံးက ကိတ်မုန့်တစ်လုံးကို အလွယ်တစ်ကူ ဖျက်ဆီးနိုင် ကြောင်း အစားအ သောက်ကျွမ်းကျင်ပညာရှင်များဆိုသည်။ မြန်မာ ဆိုရိုးအရဆိုလျင် “ ငါးခုံးမ တစ် ကောင် ကြောင့် တစ် လှေလုံး ပုပ် ” ဟူ၍ဖြစ်သည်။ ၎င်းကို English လိုဆိုလျင် “ Toxic Employee” ဟုဆိုသည်။ HR ပညာရှင်များ က တော့ toxic worker ဆိုသည်မှာ...
နောက်ပိုင်းတွင် Human Resource ဟူသော အသုံးအနူန်း မသုံးတော့
အခုတစ် လော နိုင်ငံတစ်ကာ conference တွေမှာ human resource နဲ့ပတ်သတ်ပြီး မေးခွန်းတစ်ခုထုပ်လာကြတယ်။ ထိုအရာက တော့ human resource ဆိုတဲ့ အသုံးအနူန်းကို ဆက်လက်သုံးနူန်းမလား ? HR ဌာနဆိုတာ နောက်ပိုင်းဘာဖြစ်လာမယ်ဆိုတာတွေကိုပေါ့။ အခုနောက်ပိုင်း trend မှာ HR ဆိုတဲ့ title ကစတင်ကွယ် ပြောက်စပြုပြီဖြစ်၍ အသုံးလည်းနည်းလာသည်။ Cisco တွင် Chief People Officer ဟုသုံးနူန်းလာပြီး Airbnb တွင် Chief Employees...
အလုပ်ကို အကုန်သိမ်းကြုံးပြီး ပြီးအောင်လုပ်ဖို့ထက် smartကျကျနဲ့ပြီးအောင် လုပ်နို်င်တဲ့ နည်းလမ်း(၅)ချက်ကတော့…. ၁။ အဆီပိုတွေကို ဖြတ်ထုတ်လိုက် အဆီပိုဆိုတာဟာ အလုပ်အပိုတွေကို ပြောတာပါ။ လုပ်တော့လုပ်ရမယ် အရမ်းအရေးမကြီးသေးဘူးဆိုတဲ့ အလုပ်မျိုးပေါ့ ။ အဲ့လို အလုပ်တွေအစား အရေးတကြီးပြီးဖို့ လိုတဲ့ အလုပ် သုံးလေးခုလိုက် ချရေးပြီး အရင်ပြီးအောင်လုပ်ပါ။ ၂။ ရလဒ်နဲ့တိုင်းပါ အချိန်နဲ့မတိုင်းပါနဲ့ အလုပ်တွေ...
နောက်တစ်နေ့မှာလုပ်ရမှာတွေကို မတိုင်ခင်တစ်ရက်အလိုတည်းကကြိုတင်ပြင်ဆင်ထားကြည့်လိုက်ပါ။ မနက်ဖြန်လုပ်ရမယ့်အသေးစိတ်စာရင်းတွေကို ညဖက်ကတည်းက စာအုပ်မှာချရေးထားပြီးစီစဉ်ထားတာမျိုးပါ။ ဒီလိုစီစဉ်မှုတွေဟာ ဝန်ထမ်းတစ်ဦးတစ်ယောက်စီသာမကပဲ အဖွဲ့အစည်းတစ်ခုလုံးကိုပြောင်းလဲစေနိုင်ပါတယ်။ ၁။အဖွဲ့အစည်းတစ်ခုကိုအချိန်တိုတိုနဲ့ခရီးရောက်စေတယ်။ ၂။ခေတ်ပေါ်စီးပွားရေးလုပ်ထုံးတွေရဲ့ riskတွေကိုလျော့ချပေးတယ်။ ၃။အဖွဲ့အစည်းအတွင်း...
သတ်မှတ်ထားတဲ့ goalတွေကျော်တဲ့သူတွေ၊အမူအကျင့်ကောင်းတဲ့သူတွေ၊အလုပ်ကြိုးစားတဲ့ဝန်ထမ်းတွေကို များသောအားဖြင့် ချီးကျူးကြပေမယ့် ကောင်းမွန်ပြီးသက်ရောက်မှုရှိတဲ့ feedbackမျိုးကိုပေးဖို့တော့မေ့နေတတ်ပါတယ်။Great Job ဆိုပြီးပြောလိုက်တာဟာ ဝန်ထမ်းကောင်းတစ်ယောက်အတွက်မလုံလောက်ပါဘူး။မိမိဝန်ထမ်းကို စိတ်အားထက်သန်မှုပိုတိုးစေဖို့ ကိုယ်ပေးတဲ့ feedbackတွေဟာ ၁။အစစ်အမှန်ဖြစ်ပါစေ ပေးလိုက်တဲ့...
ကျွန်တော်တို့ဟာ နေ့တစ်နေ့ရဲ့တစ်ဝက်နီးပါးလောက် အလုပ်မှာအချိန်ကုန်ကြရပါတယ်။ဒီတော့အလုပ်ကြောင့် စိတ်ဖိစီးမှုတွေရှိတာကို ဖြေဖျောက်မှုမရှိပဲ ဆက်သွားနေမယ်ဆိုရင် တစ်နေ့ထက်တစ်နေ့ စိတ်ဖိစီးမှုတွေပိုများများလာမယ့်အခြေအနေပဲရှိပါတယ်။ အလုပ်ကစိတ်ဖိစီးမှုတွေကိုဖြေဖျောက်ဖို့ ၁။ အသက်ဝဝရှူပါ ဦးနှောက်အရမ်းစားရတဲ့ အခြေအနေ (ဒါမှမဟုတ်)စိတ်ဖိစီးမှုများစေမယ့်အစည်းအဝေးတွေကထွက်လာရင် ၅မိနစ်လောက်အချိန်ပေးပြီးအသက်ဝဝရှူပါ။...
၁။ကျေးဇူးတင်ခြင်း ရလဒ်အတွက်မဟုတ်ပဲ အလုပ်ပြီးမြောက်ခဲ့တဲ့အတွက်ကျေးဇူးတင်လိုက်ပါ။ ဝန်ထမ်းတွေအတွက် လစာထက်အရေးကြီးတာကကိုယ်လုပ်ထားတဲ့ အလုပ်ရဲ့တန်ဖိုးပါ။ဖြစ်လာတဲ့ရလဒ်ကိုမကြည့်ပဲအလုပ်ပြီးမြောက်တဲ့အတွက် ကျေးဇူးတင်လိုက်တာက သူတို့ရဲ့ကြိုးစားအားထုတ်မှုကို တန်ဖိုးထားရာရောက်ပါတယ်။ ၂။ကွဲပြားမှုတွေကိုအားပေးပါ လုပ်ငန်းခွင်မှာ ဘာသာရေး၊လူမျိုးရေး၊ကျားမ အစရှိတဲ့ကွဲပြားမှုတွေအပြင် သူတို့ရဲ့ထူးထူးခြားခြား...